Tiako ny akaikinao ry Tompo
"Fa izaho, dia ny ho akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy; Ianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko ho aroko." Salamo 73:28
Dia faly miarahaba antsika mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavana amam'piadanany anie hoaminao mandrakariva.
Ity indray ry havana ny tenin'Andriamanitra tonga amiko sy aminao amin'ity androany ity, "Fa izaho ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy", tononkira nataon'i Davida io. Sambatra tokoa izay manakaiky an'Andriamanitra, hitantsika izany teo amin'ny fiainan'i Davida; ilay mpiandry ondry nefa indro tonga mpanjaka. Tanteraka taminy teto ny tenin'ny Tompo hoe: "Nahatoky tamin'ny kely ka ataoko mpanapaka ny be". Andriamanitra dia tiantsika mandrakariva, eo akaikintsika Izy. Mijery antsika mandrakariva na aiza na aiza toerana misy anao; tsy lavitra Izy fa eo anilanao; ka izany no nahatonga an'i Davida naoa hoe: ny ho akaikiny no mahatsara ahy. Nahatsapa Izy teo amin'ny fiainany fa raha lavitra an'Andriamanitra dia tsy nahefa na inona na inona; ary tena marina izany. Hitantsika ny tantarany tamin'Izy niady tamin'i Goliata. Ilay olona goavam-be, izay lehibe noho Izy nefa nandroso am-pahasahiana sy amim-pahatokisana an'Andriamanitra; fantany fa momba azy ilay mpahary, ilay Mahery, ilay tsy hay tohaina, sady lehibe, mahery noho ny mahery. Fa nahazo ny fandresena Izy noho izany. Ka izany no nahatsapany fa momba sy mitahy azy ny Tompo; eo akaikiny mandrakariva, ka rehefa miantso azy ny mpanompony dia mihaino azy Izy.
Koa toa izany koa ianao ry havana malala ao amin'ny tompo, manaova toa an'i Davida, maneke ny ho eo akaikin'Andriamanitra. Matokia Azy amin'ny fonao rehetra amin'ny saina rehetra ary amin'ny fanahinao rehetra. Sambatra izay matoky sy manana Azy ao am-po. Koa diovy ary ny fontsika mba ahafahan'ilay Tompo tiantsika honina ao anatintsika, fa hoy ny Tompo hoe: "Sambatra ny madio am-po, fa izy no hahita an'Andriamanitra" Matio 5:8. Tsy i Davida irery no nahatsapa izany fahatsarana mipetraka eo akaikin'Andriamanitra izany fa ireo mpanompon'Andriamanitra, ohatra amin'izany i Petera ilay mpianatr'i Jesosy, izay nanambarany fa sambatra Izy, hitantsika izany ao amin'ny Matio 16:15-19. Moa ve tsi sambatra isika raha toa ka toa izany koa? Efa nomen'i Jesosy antsika iahny koa izany fahefana izany. Ka rehefa akaikin'Andriamnitra isika dia mahay ny zavatra rehetra, araka izay hita ao amin'ny Filipiana 4:13. Izany no nahatonga an'i Davida ny fahatsaran'Andramanitra teo amin'ny fiainany ka nanambarany fa tsara ny mitoetra eo akaikin'ny Tompo. Ry havana, raha tianao koa ny hanam-piadanana, hanana fifaliana mandrakariva, lavitry ny tebiteby, lavitry ny fahoriana, meteza isika hanome ny fiainantsika ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Fa rehefa tafaray aminy isika dia hahazo izany fiadanana izay tsy azontsika eo amin'izao fiainana izao, fa izao tontolo izao dia hampitondra antsika fahoriana; fa ilay Andriamanitra koa, hitondra antsika amin'ny fiadanana; satria Izy ilay Andrian'ny fiadanana dia tsy iza izany fa i Jesosy Kristy. Ilay zanak'Andriamanitra velona tonga hamonjy ahy sy ianao.
Ry havana, meneke ankehitriny fa ny Tompo no mpamonjy sy mpanjaka eo amin'ny fiainanao, ampandrosoy ao am-ponao ny Tompo. Raha te ho mpandresy eo amin'ny fiainantsika isika, dia ampandrosoy Jesosy, aza avela hipitrapitra eo am-baravaran'ny fontsika Izy; meteza mpandresy miaraka aminy. satria ilay efa naharesy izao tontolo izao no efa miaraka amiko sy aminao. Ilay tompon'ny fiainana mandrakizay, ilay làlana hahatongavana sy handovana ny fianana mandrakizay. Ilay andrian'ny fiadanana.